Tag: micro | Martech Zone
2008: Sannadka Micro
Arbacada, December 26, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Tani waxay ahayd sanad xiiso leh tikniyoolajiyadda internetka. Hadaad ka eegto 10,000 cag cag, bini aadamka runti wali waxay sii hurinayaan raadadka ku saabsan sida looga faa'iideysan karo qadkaan cusub ee internetka. Waxaa laga yaabaa inay cadahay laakiin waxaan aaminsanahay in 2008 runti ay tahay sanadkii ay codsiyada iyo istiraatiijiyaduhu ku baxaan Micro. Isbeddelka websaydhka bulshada (Webka 2.0) wuxuu hadda si xawli ah ugu socdaa dhul cusub oo la bartilmaameedsaday. Xalka weyn, hal-ku-habboon oo dhan ayaa isbedelaya